ရျောနယျဒို Vs ဖာနနျဒကျဈ သရဲနီရဲ့ ဖရီးကဈနဲ့ ဖရီးကဈတာဝနျကို ဘယျသူ တာဝနျယူသငျ့လဲ? – Play Maker Sports Journal
အိုးထရကျဖို့ဒျသို့ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုရောကျလာမှုနဲ့အတူ အိုလီဂနျးနားဆိုးလျရှားအတှကျပွဿနာတှလေညျးတသီတတနျးကွီးသယျဆောငျလာပါတယျ။ဆိုးလျရှားအရငျဆုံးဖွရှေငျးရမယျ့ပွဿနာကဘယျသူ့ကို ပငျနယျတီကနျခိုငျးမလဲ၊ ဘယျသူ့ကိုဖရီးကဈကနျခိုငျးမလဲဆိုတာပါ။
ရော်နယ်ဒို Vs ဖာနန်ဒက်စ် – သရဲနီရဲ့ ဖရီးကစ်နဲ့ ဖရီးကစ်တာဝန်ကို ဘယ်သူ တာဝန်ယူသင့်လဲ?
အိုးထရက်ဖို့ဒ်သို့ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရောက်လာမှုနဲ့အတူ အိုလီဂန်းနားဆိုးလ်ရှားအတွက်ပြဿနာတွေလည်းတသီတတန်းကြီးသယ်ဆောင်လာပါတယ်။ဆိုးလ်ရှားအရင်ဆုံးဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာကဘယ်သူ့ကို ပင်နယ်တီကန်ခိုင်းမလဲ၊ ဘယ်သူ့ကိုဖရီးကစ်ကန်ခိုင်းမလဲဆိုတာပါ။